Murume Wangu Arikurara Neshamwari Yemwanasikana Wedu Murume Wangu Arikurara Neshamwari Yemwanasikana Wedu
Murume Wangu Arikurara Neshamwari Yemwanasikana Wedu
Ndiri mudzimai ane makore 45 ndinogara ku Chitungwiza. Ndave ne 22 years ndaroorwa nemurume wangu anove ane makore 47 years.
Pamakore ese aya ataroorana nemurume wangu hatina kana kumboita dambudziko mumba medu. Nguva zhinji taiti kana tikakanganisirana taigadzirisana tega pasina kana vamwe vanhu. Taidanana zvaifadza chaizvo kusvika mashura andakaitirwa nemurume wangu gore rino. Tine mwana wedu musikana ane makore 18 years aiwirirana chaizvo ne best friend yake inonzi Regina anova ari same age nemwana wangu.
Vasikana ava vakange vasingasiyane, pese pavanenge vari vanenge vari vese. Dzimwe nguva Regina aitorara pamba pedu. Last month ndakangotanga kuona ma changes pamurume wangu. Akanga asingachafariri zvekuti tikwirane. Savanhu vatikureiwo taisangana pabonde at least 3 or 4 times per week. Manje kubva last month pamwe svondo rese raipfura pasina kana kumbokwirana sababa namai. Zvakatanga kundishungurudza mumoyo sechinhu chandanga ndisina kujaira kugara ndisingararwi kwenguva refu yakadai. Murume wangu akandiudza magaramoyo chaiwo last month mushure mekunge ndamubvunza kuti chiiko chaizvo chakange chonetsa mushure mekunge tagarisana kwenguva refu yakadai. Murume wangu haana kana kuda kumbovanza akangondiudza kuti akange afunga zvekuroora mumwe mudzimai asi akaramba kundiudza kuti mudzimai wacho waaida kuroora ndiani.
Kupera kwaMay iyeye ndakaitirwa mashura chaiwo. Murume wangu akandiudza kuti mainini anova mukadzi wake wechipiri akanga achizouya kuti tizogora tese. Handina kuita nharo kana kumupikisa, zuva ravekunovira ndakanzwa kugogodza pa door. Ndakasimuka kuti ndinotarisa kuti ndiani, wanike ndi Regina shamwari yemwana wangu. Hapana chandakafungira ndakangofunga Regina akanga auya kuzoona shamwari yake mwanasikana wangu ndokubva ndatomutambira ndokumupa chigaro. Murume wangu akazouya ndokubva andibvunza kuti mavaona here mainini? Ndakangomuudza kuti hapana munhu wandamboona pano kunze kwaRegina uyu, ndipo paakandiudza kuti Regina ndiye mainini achave mukadzi wake wechpiri. Hana yangu yakarova, ndikapererwa nemashoko misodzi ndokutanga kuyerera. Ndakasimuka ndokunogara kwangu ndega.
Dambudziko ravepo ndepakurara, murume wangu akati tinorara tese pamubhedha one iwoyo. Regina anosvisvina nhengo yemurume wangu zvandisati ndakamboita hupenyu hwangu hwese. Murume mukuru anobowa, kuridza mhere chaiyo nekunakirwa. Ini ndave mudzimai mukuru handichakwanisi kukwikwidzana nevasikana vechidiki ava. Chekuita handichazivi, mwanasikana wangu akabva pamba mushure mekunge izvi zvaiitika avekugara kuvabereki vangu kuKambuzuma. Ndotiza pambe here, musha wendakavaka pamwe nemurume wangu nekuda kwaRegina ? Zvandiomera vehama